Cho Zin – မန်းလေး အစားအသောက်လမ်းညွှန် | MoeMaKa Burmese News & Media
လူ့ဂျပိုး၊ စစ်ဂျပိုး၊ ပြည်ဖျက်တဲ့အမျိုး
ခင်မောင်စော (ဘာလင်) - "ရိုဟင်ဂျာ"၏ဇာစ်မြစ်
Cho Zin – မန်းလေး အစားအသောက်လမ်းညွှန်
on Thursday, 17 May 2012 at 18:14 ·
Facebook & Blog repost / share
by ChoZin De Earthzprinzezz on Thursday, May 3, 2012 at 2:35pm ·
အနှိ လမ်းညွန်အား ရေးသားသော ငတိမသည် အလွန်တရာ အစားကြီးသလို ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ပါလေကာ ဖြစ်သောကြောင့် အဝေးမြို့များမှ လာရောက်လည်ပတ်ကြမည့် အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ရေးသားပြုစုထားခြင်းဖြစ်လေသည်၊ လိုအပ်ချက်များရှိပါက ၀ိုင်းဝန်းဖြည့်စွက်ကြရန် ဦးစွာ ပဏာမ ပန်ကြားအပ်ပါသည်၊
မန်းလေးမြို့ကို ရောက်ပြီဆို ဘာစားမလဲ မောင်ရေခဲ ဟု အစချီမေးလျှင် လူတိုင်းနီးနီး တရာမှာ ၉၉ ကား မန်းလေး မုန့်တီကို တောင့်တ ကြတာပင်၊ ဒီမှာ ရှင်းစရာ ရှိလာပြီ မန်းလေးမုန့်တီတွင် နန်းကြီး၊ နန်းလတ်၊ နန်းသေး ၊ နန်းပြား ဟု ကွာခြားပေသည်၊ ရန်ကုန်မှာ ရောင်းသော နန်းကြီးသုတ်ဆိုသည်မှာ မန်းလေးတွင် နန်းလတ်ဟုခေါ်သော လက်သန်းလုံးမရှိတရှိ မုန့်တီ သာဖြစ်သည်၊ နန်းကြီးအစစ်ကား လက်မခန့်တုတ်ကာ တော်ရုံလူ တီကောင်နှင့်တူသဖြင့် မစားရဲသော မုန့်တီဖတ်တုတ်တုတ်ကြီးများ ဖြစ်သည်၊ နန်းသေးကား မုန့်ဟင်းခါးဖတ် ဖြစ်ကာ နန်းပြားမှာ ခေါက်ဆွဲပြားသုတ်ကို ခေါ်တာပင်၊
မန်းလေးမုန့်တီမှာ ပဲမှုန့်များများ ဆီချက် အသားများများနှင့် ဖြစ်ပြီး သူ့ကို တွဲစားရန် ဆိုင်က ကြက်သွန်နီနှင့် သံပုရာသီးပေးတတ်ပေသည်၊
ခိုတောင်မုန့်တီမှာ မန်းလေးမုန့်တီနှင့်မတူ။ အသားမပါ ၊ ဆီချက် ပဲမှုန့်သိပ်မများပဲ။ ပဲသီး ဂေါ်ဖီ ထည့်သုတ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ ဗယာကြော်ထည့်သုတ်လို့လည်း ရပေသည်၊ မန်းလေး မုန့်တီလောက် မအီ၊ အဲ့လောက်လဲဈေးမကြီးသောကြောင့် ပိုစားကောင်းသည်၊
မန်းလေးမြီးရှည်နဲ့ ရှမ်းမြီးရှည်နဲ့ လုံးလုံးလဲ မတူ ပြားပြားလဲ မတူပါ၊ မန်းလေးမြီးရှည်သည်တွေကို ရှာချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပင် လမ်းဘေးမှာ တပုံစံတည်း အထမ်းလေးတွေနဲ့ ရောင်းတတ်ကြတာပင်။ ( အဲ့သည်အထမ်းမပါရင် မြီးရှည် မစစ် .. မှတ်ကြသားကြလော့)
အနှီ ကျွန်ုတို့နေထိုင်ရာ မန်းလေးမြို့သည်ကား ရှမ်းပြည်နယ်၏ တရုတ်မြို့တော် ဖြစ်သောကြောင့် အဲလေ မွှားလို့ ရှမ်းပြည် တရုတ်ပြည်တို့နှင့် နီးသောကြောင့် ရှမ်းစာ အလွန်ပေါလေသည်၊ မနက်မိုးလင်းသည်နှင့် တပြလျှင် ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင် တဆိုင်အနည်းဆုံး တွေ့ရပေမည်။ နေ့လယ်စာ ညနေစာအတွက်လည်း ရှမ်းထမင်းပုံစားဆိုင်များတွင် မြောက်ပိုင်းရှမ်းတို့၏ လက်ရာအား ငွေကျပ်တထောင်နှင့် သုံးဆောင်နိုင်ပေ၏ ။
လူအများက လွယ်လွယ်နှင့် ထိုးမုန့် ခေါ်သော်လည်း အမှန်မှာကား ထိုခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မာစကပ်၊ အိတုံ၊ ဒိုဒိုး ၊ဆနွင်းမကင်း၊ ရွှေကြည်၊ လမုန့် စသဖြင့် အမျိုးပေါင်းများစွာ ပါသည့်အပြင် တမျိုးစီတွင် မလိုင်၊ သီးစုံ ဆိုပြီး ထပ်ခွဲသေး၏။ ထို့ကြောင့် ဘာဝယ်ရမှန်းမသိလျှင် ထိုးမုန့်ဆိုင်တွင် အမြည်းစားပြီးမှ ကြိုက်ရာရွေးဝယ်နိုင်ပေသည်၊ ( ကျနော်ကတော့ ဘယ်သူထိုးမုန့်ဝယ်ဝယ် အမြည်းလိုက်စားတယ် )….
တခြားမှတော့ တမနဲ နှမ်းမနဲကို ပြာသို တပို့တွဲမှ ထိုးပေမယ့်၊ မန်းလေးက ဒေါ်ရှိကတော့ တနှစ်ပတ်လုံး ထိုးလေသတည်း၊ ( သာဓု … သာဓု .. သာဓု )
မန်းလေးမှာ ဒန်အိုးအကြီးကြီးရွက်လာတဲ့ အသည်မြင်ရင် ဗေဒင်မမေးနဲ့ ကြာဇံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် သည် ပင်၊ သည် အသည်တွေဆီမှာ ရတာ နောက်တမျိုးကတော့ ငါးရေခွံကြော်ပါ၊ ငါးဖယ် အရေခွံကို ကြွပ်နေအောင်ကြော်ထားပြီး မန်းကျည်းမှည့် အချဉ်ရည်နဲ့ တို့စားလဲ ရသလို ၊ ငရုတ်ဆီင်္ အချဉ်ရည် ဘာညာသရကာ ထည့်ပြီးလည်း သုပ်ရောင်းသည်၊
မူလလက်ဟောင်း အသုပ်စုံသည်တွေမှာ တောင်းအကြီးကြီးကို ရွက်ပြီး အထဲတွင် ငှက်ပျောရွက်နဲ့ အကန့်လေးတွေ ကန့်ထားပြီး ကြာဇံ၊ ထမင်း၊ ကြွက်နားရွက်၊ ပူစီနံ၊ အာလူး၊ ငါးဖယ် မှအစ ကွိစိ ကွစိ အမျိုးပေါင်ျးားစွာ ပါတာပင်၊
အပေါ်မှာ နွားနို့ထမင်း ညွှန်းပြီးပြီ ဆိုတော့ နွားနို့ဟင်းကိုလည်း ညွှန်းရပေမည်၊ နွားနို့ဟင်းမှာ ပူပူ ချိုချိုမွှေးမွှေး ဖြစ်ပြီး မလိုင်ဖတ်များများနှင့် မနက်ပိုင်း စားလို့တော့ အကောင်းသားပင်၊ ကျုံးတောင်ဘက် ၇၈ x၇၉ ကြားတွင် နွားနို့ဟင်းသည်တွေ မနက် ၊ ည ရှိသည်၊ ( နေ့လည်တော့ မရှိဘူး )
မန်းလေး ၀က်သားတုတ်ထိုးက ရန်ကုန်နဲ့ မတူ။ ရန်ကုန်တုတ်ထိုးကား င်္ဆီများ၏၊ ဆီကြော်နှင့်တူ၏၊ တုတ်ထိုးဗန်းထဲက အရည်ကို ခပ်သောက်ဖို့မကြိုးစားနှင့် ဆီတွေ သာဖြစ်ကာ ဘာမှ အရသာမရှိ၊ မန်းလေးတုတ်ထိုးကား ဟင်းရည်ထဲတွင် ပြုတ်ထားတာနှင့်တူပြီး တုတ်ထိုးဟင်းရည်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီး ဓါးပြားရိုက်လေးထည့် သံပုရာရည်လေး ညှစ်သောက် ၊ ဒါမှ မဟုတ် ထမင်းဆီဆမ်းနှင့် ဆမ်းစား ( ရှလွတ် ) အ၇သာ ရှိလေသည်၊
ပုရစ်ကြော်ကတော့ ရာသီစာဖြစ်သဖြင့် မိုးအကုန် ဆောင်းအကူးမှာသာ ရတတ်သည်၊ ရန်ကုန်မှာ ရောင်းတဲ့ ပုရစ်ကြော်ကတော့ ဘုရားစူး ပုရစ်ကြော်ပင် ၊ ( အမျှင်မဖြတ် အတောင်မဖြတ် ခြေမဖြတ် ချီးမထုတ် ပဲ ဒီတိုင်းကြော်ရောင်းသတဲ့ အရပ်ကတို့ရဲ့ )။ သန့်စင်ပြီးသား ပုရစ်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်းနိုင်နိုင်နဲ့ ကြော်ထားသည်မှာ ကျွပ်ရွ မွှေးပျံ့ ကာ ထမင်းဆီဆမ်းနဲ့ စားစား ဒီတိုင်းမြည်းမြည်း အရသာ ရှိတာပင်၊
မန်းလေးကို ဆောင်းရာသီမှာ သွားလျှင်တော့ မြို့တွင်းရှီ လမ်းတွေမှာ တလမ်းမဟုတ် တလမ်း ဘုရားပွဲနှင့် တွေ့ရမှာပင်၊ ဘုရားပွဲများတွင် မြန်မာမုန့် မုန့်ပေါင်း၊ မုန့်အုပ်ကလေး ၊ မုန့်ဆီကြော်၊ မုန့်ပစ်သလက်၊ ခဲလံချောင်း၊ မုန့်ဆပ်သဖူး ၊ အမဲအူပြုတ် အစရှိသည်တို့ကို မြည်းစမ်းနိုင်ပေသည်၊
5 Responses to Cho Zin – မန်းလေး အစားအသောက်လမ်းညွှန်
Mon on May 18, 2012 at 11:40 am
Thank you very much foramouthwatering account of Mandalay’s traditional foods and snacks. I was there between 1974-1976, so I missalot these stuff and this reminds me of recalling all my favourtie Mandalar foods such as Gyoyoo and Htohmonte..
minkoko on May 18, 2012 at 1:04 pm
ဒီ ချိုဇင် ဆိုတဲ့ လူကလဲဗျာ- အလကားနေရင်း မန်းမြို့ တော်မှာ နေခဲ့တဲ့သူတွေ ပြန်လည်တမ်းတ သွားရည်ကျအောင် မန်းလေး အစားလမ်းညွှန်တွေ လျောက်ရေးနေ။ စားချင်တာဗျ- ဟီး ရှလွတ်-
သုဝဏ္ဏ on May 18, 2012 at 10:48 pm
ွှအဲဒီမန်းလေးအစားအစာတွေကို တရုတ်ပြည် မန္တလေးမြီု့ တွင်းမှာရနုိုင်သလား မြို့ ပြင်မှာလား မြို့ တွင်းမှာတရုပ်ဆိုင်တွေချည်းဆိုဘဲ
Mon on May 19, 2012 at 10:47 am
Agree with that questions which I also wanted to ask as my father told me that all Burmese food shops are rare to be seen in the city, and most local ethnic Burmese are commuting to work from outskirts of town…….which makes me feel very sad as in my memories, Mandalay is an ancient second largest city which reserves and preserves the most Burmese handicrafts and cultures…….
Ma Shwe Phae on May 19, 2012 at 1:01 pm
It is very nice list of Mandalar food. If I visit Mandalay, firstly I will try to eat လက်မခန့်တုတ်ကာ တော်ရုံလူ တီကောင်နှင့်တူသဖြင့် မစားရဲသော နန်းကြီးအစစ်မုန့်တီဖတ်တုတ်တုတ်ကြီးများ* without fear. Then I will eat every food which author recomanded. I have decided I won’t return back my home without eating all famous Mandalar food. I am so hungry now. Thanks for your sharing.